Global Voices teny Malagasy » TED Talk avy amin’ny mpiara-manorina ny Global Voices Rtoa Rebecca MacKinnon · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Jolay 2011 14:52 GMT 1	 · Mpanoratra Solana Larsen Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Avaratra, Eoropa Andrefana, Angletera, Etazonia, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Lalàna, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Niteny ny mpiara-manorina ny Global Voices Rebecca MacKinnon  fa tokony hanorina orinasa tompon'andraikitra hahatonga ny aterineto hivelatra mankamin'ny fomban’ “olom-pirenena” ny olo-tsotra. Nandritra ny TED talk  tamin'ny 12 Jolay 2011 tany Edinburgh, Ekaosy  no namoaboasany fa lasa fantsom-pifandraisana voalohany eo amin'ny olo-tsotra sy ny fitondram-panjakana ny aterineto saingy nampitandremany fa misy ny andian'orinasa “mpanjakan'ny aterineto” manelanelana ny roa tonta.
Koa satria ny orinasa tsy voasakana handoto [hanasaritaka] ny tontolo na hampiasa tanora araka izay tiany, hoy ny filazany, dia tsy azo itokisana ry zareo hampandroso na hitandro ny aterineto ho sehatra misokatra sy mahaaro ny fahalalaham-pitenenana . Efa hitantsika [kely] ny fanaovana ny governemanta ho tompon'andraikitra saingy tahaka ny ahoana kosa ny fiarovana ny mpanjifa sy ny olom-pirenena manana ifandraisana amin'ny aterineto?
Nandalina momba izany lohahevitra izany i Rebecca any amin'ny boky hivoaka tsy ho ela Consent of the Networked  [Faneken'ny tafaraikitra amin'ny serasera].
Ilay mpiara-manorina faharoa Ethan Zuckerman kosa efa nahavita TED Talk tamin'ny Jolay 2010 antsoina hoe “Listening to global voices”  [mihaino ny global voices]. Na i Ethan na i Rebecca dia samy anatin'ny Filankevi-pitantanana  mitarika ny Global Voices.
TED  moa dia avy amin'ny hoe “Technology Entertainment and Design” [Haitao Fialamboly ary Haibika] ary ny valandresaka ao aminy kosa dia natao ho “ideas worth sharing” [hevitra mendrika hozaraina]. Ny famelabelarana amin'ny alalan'ny lahatsary tokanamantany atolotry ny olobe navoakan'ny TED moa dia ifampizarana an-tserasera ka jeren'ny olona anapitrisany manerantany. Manoratra ny dikany kosa ny mpanolotena  ho amin'ny fiteny samihafa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/07/17/19730/
 TED talk: http://www.ted.com/talks/rebecca_mackinnon_let_s_take_back_the_internet.html
 tany Edinburgh, Ekaosy: http://conferences.ted.com/TEDGlobal2011/
 Consent of the Networked: http://rconversation.blogs.com/rconversation/2010/10/consent-of-the-networked.html
 “Listening to global voices”: http://www.ted.com/talks/ethan_zuckerman.html
 Manoratra ny dikany kosa ny mpanolotena: http://www.ted.com/OpenTranslationProject